क्रिकेटर पुरुषलाई पुरस्कार र सम्मान, महिलालाई अपमान
खेलकुदशनिबार, १८ फाल्गुण , २०७५
खेल एउटै हुन् । हार र जीत खेलका पाटा हुन् । तर, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा किन गरिन्छ ? एउटा टोली जितेर फर्कदा विमानस्थलमा रातो कार्पेट बिच्छ्याइन्छ । अर्को टोली फर्कदा एक जना पदाधिकारी पनि विमानस्थलमा देखिदैंनन् ।
पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेट महिला र पुरुष टोलीबीचमा देखिएको सरकारी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीको विभेदको दृश्य हो यो । थाइल्याण्डमा सम्पन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) महिला विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एशिया छनोटको उपविजेता बन्दै नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली बिहीबार अपराह्न स्वदेश फर्कियो । महिला टोली अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्दा न कुनै खेल पदाधिकारी विमानस्थल पुगे, न त क्रिकेटसँग सम्बद्ध व्यक्ति नै ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बलियो उपस्थिति जनाउने क्रममा थाइल्याण्डमा भएको आइसिसी टी–२० विश्वकप एशिया छनोटमा नेपाल उपविजेता हुँदै फर्कियो । आइसिसीकै नियमानुसार शीर्षस्थानमा रहने टोलीमात्र ग्लोबल छनोटका लागि छानिने प्रावधान रहेकाले आयोजक थाइल्याण्ड शतप्रतिशत जित निकाल्दै छनोट भएको थियो । नेपाल थाइल्याण्डसँग मात्रै पराजित भयो । जसका कारण १० अङ्क जोडे पनि छनोट नभई घर फर्कनुपरेको हो ।
प्रतियोगितामा नेपालकी रुबिना क्षेत्रीले ह्याट्रिक विकेट लिएर कुवेतविरुद्ध सनसनी प्रदर्शन गरिन् । रुबिना नेपाली महिला क्रिकेट टोलीबाट दुई पटक ह्याट्रिक लिने पहिलो खेलाडी पनि बनेकी छिन् । तर, विमानस्थलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई स्वागत गर्न कोही नपुग्दा खेलाडीहरु निराश देखिएका थिए । यसअघि समर्थकको पनि बाक्लो उपस्थितिले खेलाडीलाई बाहिर आउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेकोमा बिहीबार समर्थक पनि विमानस्थल पुगेनन् ।
अघिल्लो महिना युएईमा सम्पन्न टि–२० र एक दिवसीय शृङ्खला जितेर स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय टोलीलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा रातो कार्पेट नै ओच्छयाइएको थियो । खेलाडीको स्वागतका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पुगेर विमानस्थलमै व्यक्तिगत रु. दश/दश हजार पुरस्कार प्रदान गरे । यसैगरी सरकारले जनही रु. पाँच/पाँच लाख दिने निर्णय गर्‍यो । तर, महिला टोलीलाई भने विमानस्थलमा स्वागतसमेत गरिएन ।
महिला क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक विनोद दासले पछिल्लो दुई महीना नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले उत्कृष्ट खेल खेलेको बताए। दुई महीनाबीचमा महिला टोलीले खेलेका १२ मध्ये दुई खेलमा मात्र पराजय भोग्यो । आइसिसीको बरियतामा समेत नेपाल १४औँ स्थानमा रहनु ठूलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।
नेपाली क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना क्षेत्रीले छोटो समयमा महिला क्रिकेट टोलीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेटमा क्षमता प्रमाणित गरेको बताउँदै विमानस्थल आइपुग्दा नरमाइलो लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । “यस्तै हो भने नेपालमा महिला क्रिकेट पनि छ नभने पनि हुन्छ”, उनको भनाइ
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे सीमित स्रोतसाधन र तयारीका बाबजुद नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । “नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीलाई पनि राज्यले सम्मान गर्दै अघि बढेमा मात्रै थप केही गर्ने जोश र जाँगर खेलाडीमा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन्।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पहिलो कप्तान एलबी क्षेत्रीको पहलमा नेपालमा महिला क्रिकेटको उदय भएको थियो । क्षेत्रीले त्यतिबेला बाँकेका विभिन्न ३३ विद्यालय पुगेर क्रिकेटसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए । १५ फागुन २०६१मा क्षेत्रीको सपनाले त्यतिबेला साकार रूप लियो, जतिबेला नेपाली किशोरी पहिलोपटक औपचारिकरूपमा ब्याट बोकेर मैदानमा उत्रिए । उक्त प्रतियोगितामा २९ विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए ।उक्त प्रतियोगिता नै पहिलो राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली छान्ने आधार बनेको थियो ।
क्षेत्रीले आफ्नो पुस्तक कप्तान १९९८ मा लेखेका छन्, त्यसपछि २०६४ सालमा बाँके र रुपन्देही महिला टोलीबीच तीनवटा मैत्रीपूर्ण खेल भएको थियो । सोही वर्ष नेरी थापाको कप्तानीमा पहिलो राष्ट्रिय महिला घोषणा गरिएको थियो ।
दृष्टिविहीनको फाइल मन्त्रालयमै थन्कियो
युएईबाट शृङ्खला जितेर स्वदेश फर्केकै दिन पाकिस्तानबाट पनि दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली अर्को शृङ्खला जितेर स्वदेश फर्किएको थियो ।
दृष्टिविहीन टोलीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट विमानस्थल पुगे । उनीहरुलाई सोही दिनै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा बोलाएर सम्मान पनि गरियो । तर, राखेपले खेलाडीलाई जनही रु. एक/एक लाख र प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई जनही रु. ५० हजार दिन सिफारिश गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले अहिलेको खेलकूद कार्यविधि अनुसार दृष्टिविहीन टोलीलाई आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने बताउँदै कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको बताए।
“राखपेले आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छ, अहिलेको कार्यविधि अनुसार दिन सकिँदैन, अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि संशोधनमा लागेका छौँ”, उनले भने । –कुमारप्रसाद चौलागाई/रासस